I can't install Kaspersky Antivirus 7.0 on Acer Aspire 4315 Laptop - MYSTERY ZILLION
I can't install Kaspersky Antivirus 7.0 on Acer Aspire 4315 Laptop
I can't install Kaspersky Antivirus 7.0 on Acer Aspire 4315 Laptop..
I using Window XPsp2. Do not show error.:2::2::2:
I using Window XPsp2. Do not show error.:2::2::2:Please Help me.....
တစ်အချက်က services.msc ထဲက Windows Installer ကို run လို့ရပါသလားခင်ဗျာ..restart လုပ်ပါ
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ user account က limite ဖြစ်နေပါသလား၊
တစ်ခါတစ်ရံမှာ *.exe ဆိုတော့ Virus ၀င်ရောက်နေရင်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
KAV7 က ပြုပြင်ထားတဲ့ CD တွေမှာပါတယ် program လား သူတို့က အဆင်မပြေမှုရှိတက်ပါတယ်..
သို့မဟုတ် download ဆွဲထားတာလားခင်ဗျာ..အဆင်မပြေရင်ဆက်လက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်..
ကျေးဇူးတင်လျက် ချစ်သော ice
Forum -> ကြေငြာချက်များ -> မသိမဖြစ် အောက်မှာ မေးထားလို့ သင့်တော်ရာ နေရာကိုပို့ထားလိုက်ပါတယ် .။
ကျွန်တော် ဒီနေ့ နှစ်ခုတွေ့ပါတယ် ... :2: ဘာဖြစ်လို့များ ဒီလိုအဖြစ်တွေဖြစ်နေရတာပါလဲ :106: သင့်တော်ရာနေရာကိုရှာလို့မတွေ့တာလား ဒါမှမဟုတ် လူသတိထားမိစေခြင်တာများလား ..။
သင့်တော်ရာနေရာမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် မေးစေခြင်ပါသည်။